ပရိုမိုးရှင်း KAIYO Japanese Restaurants & Sushi Bar
ဂျပန်စာ စစ်စစ်ကို စားဖို့ ဂျပန်မြေကို တကူးတက သွားစရာမလိုတော့ပါဘူး… အမှန်တော့ ဂျပန်စာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဆူရှီ ကိုပဲအများဆုံး ပြေးမြင်မိတာများတယ်…
KAIYO Japanese and Sushi Bar ရောက်ပြီး Menu ကြည့်လိုက်တော့မှာပဲ ဂျပန်စာဆိုတာ ဒီလိုပါလားလို့ စိတ်တောင်ဝင်သွားတယ်….
ဂျပန်အစားအသောက်တွေ အများကြီးထဲကမှ KAIYO မှာ Hot ဖြစ်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ Japanese Curry မြန်မာ အခေါ်ကတော့ (ဂျပန် ဟင်းအနှစ်) တဲ့ …
ဂျပန် ဟင်းအနှစ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
အနှစ်ဟင်းကို ၁၈၀၀ ခုနှစ် တွင် ဗြိတိန် လူမျိုးများ၏ အနောက်တိုင်းပုံစံ အသားများကို ဟင်းခပ်မှုန့်များနှင့်ရောစပ်ခါ ပေါင်းချက်သည့် ပုံစံအား ဂျပန်လူမျိုးတို့မှ ရိုးရာ မပျက် မူပိုင်ပုံစံအသစ်ဖြင့် အာရှတို့ရဲ့ အဓိက အဟာရဖြစ်စေတဲ့ ထမင်း နဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
ဂျပန် ဟင်းအနှစ်ကိုတော့ မျက်စိ အမြင်စွမ်းအားကို ထောက်ပံပေးသော ကြက်သွန်နီ ၊ ဗီတာမင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မုန်လာဥနီတို့ နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသလို လူကြီး လူငယ်မရွေး စားသုံးနိုင်တဲ့ အဟာရဖြစ်စေတဲ့ Menu တစ်ခုပဲပါ….
KAIYO မှာအသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကတော့ FDA အသိအမှတ်ရရှိထားပြီး ပြည်ပမှတင်သွင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ အားအသုံးပြု၍ ဝါရင့်ပြီး ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိ စားဖိုမှူး များကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာ နဲ့ သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်….
B&F Mobile Applications နဲ့ သွားရောက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး 20,000 ကျပ် နဲ့ အထက်သုံးဆောင်ပြီး Mobile App က KAIYO ရှိတဲ့ စာမျက်နှာလေးမှာ ပေါ်နေတဲ့ “ Use Now” ခလုတ်လေးကို နှိတ်ပြီးတော့ ကျလာတဲ့ “Success” စာမျက်နှာလေးကို ဆိုင်ကတာဝန်ရှိသူ တစ်ဉီးဉီးကို ပြသပြီးတော့ (10) % Off ပရိုမိုးရှင်း ရယူနိုင်ပါတယ်….
ပရိုမိုးရှင်း အကြောင်းအရာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်နံပါတ် 09 895711240 ဒါမှမဟုတ် 09 895711235 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်….
Promotion Exp - 11.March.2020 to 11. September
KAIYO Japanese Restaurants & Sushi Bar ဆိုင်
No.(8/002), Minyekyawswa Housing, Thingangyut Road, Tamwelay, Tamwe Township
ဖုန်းနံပါတ် : 01 543 633
Ends Friday, September 11, 2020